‘९० को दशकमा जति पप गीत सार्वजनिक भए, सबै कर्णप्रिय थिए । अहिलेसम्म त्यही कालखण्डमा
बनेका पप गीतहरूकै बोलवाला छ ।’
पप गायक सञ्जय श्रेष्ठ ‘माया मेरी माया...’ लाई आफ्नो निजी राष्ट्रिय गीत भन्न रुचाउँछन् । पछिल्लो पटक उनले स्टुडियोमा पुन: यही गीत रि–रेकर्ड गरे । उनी कन्सर्टमा उक्लिँदा पनि दर्शकले उनलाई यही गीत नै गाउन अनुरोध गर्छन् । के सञ्जयले त्यसपछि कुनै पनि गीत रेकर्ड नै गरेनन् त ?
पप गायक धीरज राईले पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा जम्मा एउटा मात्र पप गीत रेकर्ड गरे, बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल शीर्षकमा । उनी आफ्ना हरेक कन्सर्टमा बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश दिने यो गीत त गाउँछन् नै, बाँकी पुरानै गीत गाएर दर्शक तथा श्रोतालाई मनोरञ्जन गराउँछन् ।
पप गायक नविन के भट्टराई कन्सर्टमा व्यस्त भइरहन्छन् । यद्यपि, उनले पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा जम्मा एउटा मात्र नयाँ गीत रेकर्ड गराएका छन्, ‘चाहना एउटै मेरो’ शीर्षकका । दुई वर्षअघि रेकर्ड भएको उक्त गीतले युट्युबमा १३ लाख बढी भ्युज पाएको छ । कन्सर्टमा उनी यो नयाँ गीतसहित आफ्ना पुरानै गीतहरू पस्किँदै आएका छन् ।
पप गायक दीपेशकिशोर भट्टराईले पछिल्ला केही वर्षमा जम्मा एउटा मात्र नयाँ गीत रेकर्ड गरेका छन्, ‘नशा है लाग्यो’ शीर्षकमा । सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा उनलाई पनि दर्शकहरूले उनका पुराना गीतहरू नै गाउन अनुरोध गर्छन् । पप गायक विधान श्रेष्ठले लामो समयपछि अघिल्लो वर्ष आफ्नो नयाँ गीत रेकर्ड गरेका थिए । त्यसपछि उनले नयाँ गीत रेकर्ड गर्न भ्याएका छैनन् ।
पप गायक सचिन रौनियार यो प्रसंगमा अपवाद बनेका छन् । करिब १२ वर्षको मौनतापछि उनी गत वर्षदेखि मात्र सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय पुनरागमन गरेका छन्, ‘ए मान्छे’ मार्फत । लामो समयको अन्तरालपछि नयाँ गीतमार्फत कमब्याक गरेका सचिनले त्यसपछि थप दुई गीत पनि दर्शकमाझ ल्याएका छन् कु कु कु तथा माया सरर...शीर्षकमा । यी दुई गीतले पनि दर्शकको मन जितिरहेको गायक रौनियारको दाबी छ ।
किन गाउँदैनन् नयाँ गीत
गायक सञ्जय श्रेष्ठको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने दर्शक तथा श्रोताले सबैभन्दा पहिला जुन गीतलाई मन पराए, भविष्यसम्म पनि त्यही गीत सुन्ने बानी परेको हुन्छ । ‘मैले माया मेरीपछि दर्जनौं गीतहरू गाएको छु, उनी भन्छन्– ‘तर मैले जति नै सिंगार पटार गरेर नयाँ गीत गाए पनि दर्शकले मलाई स्टेजमा देख्ना साथ माया मेरी माया नै सुन्न खोज्छन् । कलाकार भएपछि दर्शकको कुरा सुन्नै पर्‍यो ।’
गायक दीपेशकिशोर भट्टराईको तर्क अलि बेग्लै छ । उनी भन्छन्– ‘पहिले–पहिले नेपाली पप गीत–संगीत जुन रूपमा सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो रूपमा सुनिँदैन ।’
गायक नविन के भट्टराईको भनाइमा नयाँ गीतमा जति नै मेहनत गरे पनि दर्शकले नयाँ गीतको तुलनामा आफ्ना पुराना गीतहरू नै मन पराइरहेकाले नयाँ गीत–संगीतहरू ओझेलमा परिरहेका छन् ।
गायक धीरज राईको बुझाइमा अहिले सामाजिक सञ्जालको सहजताका कारण राम्रा–नराम्रा गायक–गायिकाहरू च्याउसरी हजारौंको संख्यामा जन्मिरहेका छन् । गीत सुन्नका लागि श्रोताहरूसँग समय नै छैन । गम्भीर र गहिरा प्रकृतिका गीतहरू सुन्ने अवस्था कमै छ । स्रष्टाहरूलाई छिट्टै गीत गाएर छिट्टै हिट हुनु छ । संगीत बजार व्यापार मुखी भएका कारण पनि आफूले नयाँ–नयाँ गीत रेकर्ड गर्न रुचि नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
यतिबेला कहाँ छ पप संगीत ?
गायक सञ्जय श्रेष्ठ भन्छन्– ‘पप र रक संगीत पहिले जुन उचाइमा थियो, त्यो उचाइमा त छैन । पप गीतहरू त्यति चलेका छैनन् । पप गीतका सर्जकहरू अहिले रेकर्डिङ स्टुडियोहरूभन्दा कन्सर्टमा बढी व्यस्त भइरहेका छन् । लोक गीत, आधुनिक गीत, चलचित्रका गीतको तुलनामा पप गीत माथि आउन सकेको छैन । ‘तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी हरेक शुक्रबारजसो कन्सर्ट दिइरहेका छौं । विदेशका कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छौं । मसहित जेम्स प्रधान, बबिन प्रधान, सचिन रौनियार आदि संगीतकर्ममै जुटिरहेका छौं ।’ गायक धीरज राई भने, नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पप गीत–संगीतले एउटा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, पप गीतका श्रोताहरू आफ्नै किसिमका छन् । पप संगीत आफ्नै संसारमा रमाइरहेको छ ।’
नविन के भट्टराईको तर्क बेग्लै छ । उनी खरो भाषामा भन्छन्– ‘खासमा अहिले पप गीतहरू मूलधारमै छैनन् । मूलधारका लागि त पप संगीत मरिसक्यो, इट्स डेड ।’ गायक भट्टराई थप्छन्–
‘अब अहिले पप र रक गीतहरू बाँचेको भनेको भनेको लाउञ्ज, बार तथा ठूल्ठूला चौरहरूमा मात्र हो, सञ्चारमाध्यमहरूमा त मरिनै सक्यो ।’ उनका बुझाइमा पप गीत–संगीतलाई कन्सर्टले मात्र जोगाइरहेको छ । पप गायक विधान श्रेष्ठ भने यतिबेला पप गीत–संगीत सुस्ताएको अवस्थामा छ । सांगीतिक क्षेत्रमा अन्य विभिन्न विधाका गीत–संगीत चर्चामा आइरहेको बेला पप संगीत सुस्ताएको उनको कथन छ ।
पप गायकहरूको व्यस्तता ?
साप्ताहिकले कुनै बेलाका चल्तीका पप गायकहरूलाई उनीहरूको पछिल्लो सांगीतिक व्यस्तताका बारेमा जिज्ञासा राखेको थियो । यसको जवाफमा गायक सञ्जय श्रेष्ठ भन्छन्– ‘मेरो सांगीतिक व्यस्तता घटेको छैन । कन्सर्टहरूले मलाई व्यस्त बनाइरहेको छ । काठमाडौं तथा काठमाडौं बाहिर हरेक शुक्रबारजसो कुनै न कुनै ठाउँमा कन्सर्ट भइरहेकै हुन्छ । नयाँ वर्ष–२०२० लागेपछि विदेश गएर कन्सर्ट दिने तयारीसमेत भइरहेको छ ।’
गायक धीरज राई पनि आफू सांगीतिक गतिविधिहरूमा व्यस्त भइरहको बताउँछन् । उनको व्यस्ता भने अन्य पप गायकहरूको तुलनामा केही पृथक छ । ‘मैले आफ्ना गीत–संगीतमार्फत बुद्धको सन्देश फैलाउने अभियानलाई अघि बढाइरहेको छु, जसमा दर्शक तथा श्रोताको पनि राम्रो साथ पाएको छु । मैले कुनै बेला पप गीत गाएरै लोकप्रियता हासिल गरेको थिएँ, अहिले बुद्धलाई गीतमा गाउन थालेपछि सम्मानसमेत पाउन थालेको छु ।’
गायक सचिन रौनियारले भने पुनरागमनपछि सांगीतिक कार्यक्रममा व्यस्तता बढेको बताउँछन् । कन्सर्ट, म्युजिक एवार्ड्स जस्ता कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेको छु । पछिल्लो पटक गाएका गीतबाट पुरस्कृतसमेत भइरहेको छु । श्रोताहरूबाट पाएको मायाले अझै धेरैभन्दा धेरै गीतहरू गाउन हौसलासमेत पाएको छु ।
२०५६ सालमै ‘काला पानी...’ गीत गाएर चर्चामा आएका गायक श्रेष्ठले पछिल्लो समय सांगीतिक कार्यक्रमको तयारीमा छन् भने निकट भविष्यमै खुकुरीको विषयमा गीत रेकर्ड गराउँदैछन् ।
पछिल्ला गीतबाट कस्तो प्रतिक्रिया
गायक सञ्जय श्रेष्ठले केही महिनाअघि आफ्नो पुरानो गीत माया मेरी मायालाई रि–रेकर्ड गर्ने मौका पाएका थिए । उक्त गीतको भिडियो टुर्बोग आर्बेटरीका रूपमा बजारमा आएको छ । दर्शक तथा श्रोताले अत्यन्त रुचाएकै कारण आफूले उक्त गीतलाई पुन: नयाँ शैलीमा गाएको उनको भनाइ छ । निकट भविष्यमै उनी सिंगल ट्रयाकका रूपमा केही गीत रेकर्ड गराउँदै छन् । तीमध्ये टिजिआईएफ गीतको काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ भने एउटा मैथिली भाषाको गीतमा रक मिक्स गरेर समेत गाउँदैछन् । यसबाहेक केही पप गीतहरू लिएर दर्शक तथा श्रोतामाझ आउने गायक श्रेष्ठको तयारी छ ।
किन पुरानै गीत रुचाउँछन् दर्शक ?
गायक सञ्जय श्रेष्ठ भन्छन्– ‘जुन गीतले हामीलाई चिनारी दियो । जुन गीत सुन्दा दर्शकको कानलाई नै आनन्द आउँछ, उनीहरू तिनै गीत सुन्न चाहन्छन् । कुनै पनि कलाकारलाई स्टेजमा देख्दा उसको जुन गीत सबैभन्दा लोकप्रिय छ, जुन गीतले चिनिएको छ, त्यही नै गीत सुन्न चाहने मानवीय स्वभाव नै हो ।’
गायक श्रेष्ठको अनुसार सन् १९९० को दशक नेपाली पप संगीतका लागि सुनौलो थियो । ‘९० को दशकमा जति पप गीत सार्वजनिक भए, सबै कर्णप्रिय थिए । अहिलेसम्म त्यही कालखण्डमा बनेका पप गीतहरूकै बोलवाला छ । दर्शक तथा श्रोताहरूले पनि तिनै अवधिमा सार्वजनिक भएका गीतहरू बढी मन पराएका छन् । ‘हामीले जति नै सुन्दर गीतहरू तयार पारे पनि दर्शकको मनमा हाम्रा पुराना गीतहरू बसेकाले त्यो छाप मेटाउन असाध्यै गाह्रो छ,’ गायक श्रेष्ठ भन्छन् ।
समग्र सांगीतिक क्षेत्र कस्तो छ ?
गायक धीरज राई भन्छन्– ‘दिन प्रतिदिन बाँच्नका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । दाल, भात, तरकारी अनि धेरैपछि मात्र गीत–संगीतको पालो आउँछ । हामी जस्तो गरिब राष्ट्रमा बाँच्नका लागि समय छुट्टयाउँदा–छुट्टयाउँदै गीत–संगीतका लागि साह्रै थोरै समय निस्कन्छ । त्यसमाथि थोरै मिहिनेतले बनाएको गीतको गुणस्तर नै कमसल नै हुन्छ । संगीतको बजार नै व्यापारमुखी हुँदा व्यापारमुखी सिर्जनाहरू क्षणिक समयका लागि मात्र हुन थालेका छन् । त्यसै कारण अहिलेका धेरै स्टारहरूको सांगीतिक आयु एक साता मात्र देखिएको छ, जुन सांगीतिक क्षेत्रका लागि बिडम्बनापूर्ण हो ।’
गायक सञ्जय श्रेष्ठको बुझाइमा अहिलेको सांगीतिक बजार डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ । ‘पहिला–पहिला ट्रयाकमा गीतहरू रेकर्ड गरिन्थ्यो, उनी भन्छन्– ‘अहिले सबै गीतहरू डिजिटल प्रविधिमा रेकर्ड गरिन्छ । विश्वमा उपलब्ध कुनै पनि बाजा नेपाली गीतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति हुँदा–हुँदै पनि पप संगीतको क्षेत्रमा भने नयाँ काम भइरहेको छैन, शायद श्रोताले नरुचाएका हुन् कि अथवा हामी नै नयाँ सिर्जना गर्न डराएका पो हौं कि ?’
दिपेश किशोर भट्टराई भने धेरै गायक–गायिकाको उदय भएका कारण संगीतलाई हल्का रूपमा लिने प्रचलन बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘धेरै कलाकारहरूको जन्म भए पनि अहिले सांगीतिक क्षेत्र अहिले पनि त्यति चित्त बुझ्दो छैन जस्तो लाग्छ ।’
नविन के भट्टराई भन्छन्– ‘अहिले सांगीतिक माहौल नै परिवर्तन शील छ । पप र रक गीत लाइभ कन्सर्टमा मात्र सीमित भएका छन् । आधुनिक र लोक गीत मूल धारमा छन् । हामी पप गायकहरूलाई लाइभ कन्सर्टले नै बनाइरहेको छ ।’
गायक सचिन रौनियारको बुझाइमा सांगीतिक क्षेत्रमा आज पनि संक्रमण कालमै छ । उनी भन्छन्– ‘धेरै प्रकारका गीतहरू आइरहेका छन् । धेरै प्रकारका गायक–गायिकाहले कोसिस पनि गरिरहेका छन् । पपदेखि लोक, आधुनिकसम्म मिश्रित शैलीका गीतहरू बनिरहेका छन् ।’ गायक रौनियार युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालका कारण नेपाली संगीत अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत भइरहेको धारणा व्यक्त गर्छन् । यसबाहेक अहिले नेपाली संगीत फिल्टर हुने क्रममा छ । ‘जसले आफ्नो संस्कृतिलाई नबिर्सि गीत–संगीत सिर्जना गरिरहन्छ, ती गीतहरू अजर–अमर हुन्छन्, गायक रौनियार भन्छन् ।